Vincent Wijeysingha: Politisianina ao Singapore Nilaza ny Maha-Pelaka Azy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2013 15:53 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, বাংলা, Ελληνικά, Español, English
Namoaka hafatra tao amin'ny Facebook ny politisianina avy amin'ny mpanohitra, ny Dr Vincent Wijeysingha, fa pelaka izy, ka izy no mpanao politika voalohany nahasahy niteny ampahibemaso ny maha-pelaka azy ao Singapore. Mpikambana ao amin'ny Antoko Demokraty Singapore izy ary kandidà ho amin'ny solombavambahoaka teo aloha. Tamin'ny hafatra manaraka no nanazavany ny antony namoahany izany:
Tsy ny namoahana azy ity no mafy indrindra. Eny, efa mihamora dia mihamora ny manao azy rehefa mihabetsaka ny olona manao izany. Ny eo ampanombohana ihany no sarotra indrindra sy ny mizaka asa manokana lava dia lava ilain'ny fiaraha-monina handavoana ny famoretana isan'andro iainan'ny LGBT.i
Dr Vincent Wijeysingha. Saripika avy amin'ny Facebook
Derain‘i Choo Lip Sin tao amin'ny filazan-kevitra ao amin'ny Facebook ny Dr Vincent:
Mahatsapa aho ankehitriny fa toerana azo itomboana sy hahatrarana antitra i Singapore, firenena feno fahatsora-po sy ny rariny. Nanainga fanahy maro andalam-pahafatesan'ny fahadisoam-panantenana ianao tamin'ny nipetrahanao tamin'ny toerany (nampidiranao ny kirarony) sy niatrika ny zava-tsarotra atrehan'izy ireo andavanandro.
Niarahaba azy ihany koa i Anyhow Hantam:
Nafana sy betsaka fiderana azy noho ny fahasahiany nilaza ny momba azy ny nandraisana izany famoahana tsiambaratelo izany. Ny marina dia nanampy izy tamin'ny filazana fa tsy manana ‘programa momba ny pelaka (gay)’. Raha ny hevitro manokana dia mahatsapa aho fa fanapaha-kevitra mila fahasahiana lalina ny nataony ka miarahaba azy manokana aho noho ny fanekeny ny ilazany ny fiainany manokana mba hampangina ny tsikera.
Mirana tamin'ny nandrenesana fa manana politisianina nanambara ho fantatry ny rehefa ho pelaka i simple & gayforward:
Oaioay, manana politisiana miseho ampahibemaso ho pelaka isika ankehitriny. Moa tsy mahagaga va? henjana izany. Tsy mila lazaina intsony (saingy nolazaina ihany moa), tena fahasahiana avy aminy tokoa ny fanaovana izany. Mety ho maro ny fatiantoka ho azony amin'izany, mbola maro dia maro ny fahasarotana sy ny sakatsakana hatrehina amin'izao fotoana izao vokatr'izany, saingy nataony ihany izany. Goavana e! Manantena aho fa hampahery azy sy hampavitrika azy ny fianakaviany, ny namany ary indrindra ireo rehetra mety ho mahalala azy manokana ary ireo namany rehetra.
Saingy takian'i Barrie ilay tanora politisianina hampiseho raha manana ‘programa momba ny gay (pelaka)’:
Tsy manana olana aho raha misy depiote pelaka, tahaka ny tsy ananako olana raha kristiana, silamo, Haindò, Bodista na tsy mino an'Andriamanitra ny depiote. Ny olako amin'ny Dr Wijey dia izy no lehilahy ho apetraky ny LGBT, ka afa-mampiditra fomba fiaina tsy mahazatra isan-karazany amin'ny alalan'ny fanaovan-dalàna izy. Iray amin'izany ny fanaovana ho ara-dalàna ny firaisana ara-nofon'ny tsy ampy taona.
Nanamarika ny lanjan'ny fiarahamonina LGBT ao Singapore eo amin'ny sehatry ny politika ny The Independent (Ny Fahaleovantena) :
Raha tarafina eo amin'ny tontolo politika, ny fiovam-pihetsika ao amin'ny governemanta no ahafaha-mitaratra ny zavamisin'i Singapore vaovao. Mpanohitra izay eo amin'ny fitondrana ry zareo ao amin'ny fiarahamonina pelaka sy ireo manohana azy amin'ny ankapobeny ary rehefa mihamanify moa ny fanohanana ny antoko mpitondra isaky ny mitohy ny fifidianana, dia vondrona manana tsindriletam-pahefana tsy azon'ny eo amin'ny fitondrana tsinotsinoavina ry zareo.
Ny Masoandro Mamirapiratra ao Singapore mieritreritra fa “double-edged sword” ny filazan-tsiambaratelo nataon'ny Dr Vincent ary nampitandrina fa mety hiantraika amin'ny Antoko Demokraty Singapore amin'ny fifidianana 2016 izany.